General Soomaali | Wixii Ku Qoran Af-Soomaali [Archive] - SkyscraperCity
SkyscraperCity > Continental Forums > Africa > East Africa > Somalia > Geedka Shirarka / Off-topic forum > General Soomaali | Wixii Ku Qoran Af-Soomaali
View Full Version : General Soomaali | Wixii Ku Qoran Af-Soomaali
AyatulahiApril 13th, 2012, 01:49 AMBoggan waxaa loo sameeyay, kaliya inaad soo dhigto wixii ku qoran luuqada hooyo ee Soomaaliga, markaa fadlan iska ilaali inaad luuqad kale wax ku qorto intaad boggan ku jirto.
Wax-yaabaha lasoo dhigi karo boggan waxaa ka mida:
- Wax kasta oo ku qoran Af-Soomaali.
- Wixii war cusub ah oo Soomaali ah.
- Heesaha iyo Riwaayadaha - Maqaalada ku baxa luuqada Soomaaliga
- Arrimaha Bulshada
Iyo Wax kasta oo Afka Hooyo ku qoran.
KhadarApril 13th, 2012, 05:02 AMwaxaan jeclahay ninga cajalkaan ka hadlaayo waa nin cilmi uleh dalkiisa iyo dadkiisaba.
juzme123June 18th, 2012, 12:31 AMSawirkan ila fiiriya iyo sida ay meheraduhu calaamadahooda af-ajanebi ugu qoreen!? Waa iska badownimo. Iminka yay is leeyihiin wuu fahmayaa qoraal ku qoran af-ajanebi, oo weliba ah "shoes bags and accessories"? Waa caqli nooc ma ah sidaasi :ohno:
Waa in sharci laga dhigo in wixii calaamado, magacyo ama xayaysiis ah af-Soomaali lagu qoro. Meelaha caalamiga ah uun (sida madaarada, dekadaha, iyo wixii la mid ah) ayay ku haboontahay in calaamdahooda, magacyadooda ama xayaysiiskooda luqaddo caalami ah (sida af-Ingiriisi) lagu qoro.
Waxa kale' oo aad u jira inay ereyada af ingiriisiga ah ee ay isleeyihiin isticmaala xitta khalad u qoraan, ama inay magacyo ka koobaan af-Soomaaali iyo af-Ingiriisi la isku daray isticmaalaan. Sidan oo kale' macquul ma aha af Soomaaligana waa lagu fadaraynayaa. Tusaale waxa ah sawirkan calaamadda dukaanka la yidhaahdo "Mama & nunu care". Mama, nuune' (oo khalad loo qoray) iyo care ayaa la isku daray :no:
Hadraawi ayaaba beri dhoweeyd lahaa in erayada ajanebiga ah, gaar ahaan kuwa ingiriisiga ah oo ugu badan, ee luqadeena soo gelaya ay luqadeena halis ku yihiin. Waxana ereyadan aynu afafka ajanebiga ah ka baranay sababay in aynu intaa la kulmayno waxyaabo ayna u jirin ereyo af-Soomaali ah. Waxa uu yidhi markaa, waxa xal noqon kara hadii ereyadan af-ajanebiga ah loo sameeyo/lagu bedello ereyo af-Soomaali ah. Wuxuu waliba ku taliyay in ereyo luqadeena ku jira oo sii lumaya madaama aan wakhtiyadan aad loo isticmaalin, waxyaabahan cusub ee aynu la kulmayno erayo looga dhigo. Gaar ahaan wuxuu carabka saaray ereyo ay 'reer mii/baadiye/guuraa' gu isticmaali jireen oo sii lumaya madaama ay Soomaalidu beryaham si xawli ah magaalooyinka ugu guureen, oo uu yidhi in ereyadaas waxyaabahan cusub ee aynu la kulmayno erayo looga dhigo.
XuseinJune 19th, 2012, 06:55 AMSawirkan ila fiiriya iyo sida ay meheraduhu calaamadahooda af-ajanebi ugu qoreen!? Waa iska badownimo. Iminka yay is leeyihiin wuu fahmayaa qoraal ku qoran af-ajanebi, oo weliba ah "shoes bags and accessories"? Waa caqli nooc ma ah sidaasi :ohno:
Kab, Guunad iyo "Alaab"? :lol::lol:
Horta, "accessories" Af-Soomaali maxaay?
AyatulahiJune 19th, 2012, 11:22 AMXussein what happened to this thread, ku stick garee xagga sare fadlan.